🥇 ▷ Apple waxay kuu oggolaaneysaa inaad hagaajiso iPhone-ka ka dammaanadda, oo leh qaybo rasmi ah, aqoon-isweydaarsiga qaybaha saddexaad ✅
Apple waxay kuu oggolaaneysaa inaad hagaajiso iPhone-ka ka dammaanadda, oo leh qaybo rasmi ah, aqoon-isweydaarsiga qaybaha saddexaad
Dayactir iPhone Xarumaha aan “sharciyeysanayn” ee ay leedahay Apple Waa wax ay shirkadda Cupertino waligeed jeclayn. Xaqiiqdii maalmo ka hor waxaan ogaanay sida Apple It ay u muujisay fariin naxdin leh kuwa ku beddelay batteriga xarumaha aan rasmiga ahayn. Hadda waxay umuuqataa in Apple doonayo inuu “gacantaada furo” wuuna kuu oggolaanayaa hagaajiso iPhone-ka damaanad qaadka, oo leh qaybo rasmi ah, aqoon-isweydaarsiyo koox saddexaad ah.
Astaamaha Mareykanka ayaa taageeraya hadalka “Haddii aadan garaaci karin, ku soo biir” waxayna dhowaan ku dhawaaqday inay la kaashanayso ganacsato madax-bannaan oo kala duwan, xilligan oo keliya gudaha Mareykanka, si loo oggolaado hagaaji taleefannadaada Kuwaas oo horeyba u soo buuxiyay muddadii loo qabtay damaanad. Tan awgeed waxaa la siin doonaa qaybo rasmi ah oo beddel ah oo loo qaadan karo adeegyada farsamada ee rasmiga ah ee Apple.
Apple waxay siin doontaa shirkado dayactir badan oo madax-bannaan, yar ama yar, oo leh qaybo isku mid ah oo asal ah iyo kuwo asal ah, aalado, tababaro, buugaagta dayactirka iyo baaritaanka sida bixiyeyaasha Adeeggooda Idman ee Apple.
Shirkadda ayaa ku dhawaaqday war-saxaafadeed ay ku sheegtay in marka lagu daro qaybaha, shaqaalaha la tababari doono si ay u bixiyaan adeegga ugu wanaagsan ee suurtagalka ah isla markaana ay awoodaan hagaaji iPhone sida ay noqon laheyd ayaga u gaar ah Apple Store ee sumadda.
Qalabka ugu fiican ee lagu dayactiro iPhone XS, XS Max, XR iyo iPhone X shaashadda naftaada
Fursado badan markaad dayactireyso iPhone-kaaga
Isticmaalayaasha iPhone waxay hadda heli doonaan fursado badan oo ay ku helaan dayactir iyo adeegyo taageero, oo ay oggol tahay Apple, halkii ay marwalba ku qasbi lahaayeen inay tagaan dukaanka Apple Store Maskaxda ku hay in xarumahaani ay ku yaalliin magaalooyinka waaweyn isla markaana adeegsadayaasha oo dhami aysan lahayn fursad isku mid ah oo ay isku soo dhawaadaan . hagaaji iPhone sidaa darteed go’aankan Apple weli waa war wanaagsan.
Haa, Apple tilmaamayaa in, dabcan, “Qalabka dayactirka ee shirkadda, iyo sidoo kale tababarka, tilmaamaha adeegga iyo aaladaha baaritaanka waa in lagu hayaa sirta ugu weyn.”
Si aad ugu qalanto barnaamijkan cusub, shirkadaha waa inay lahaadaan farsamo-yaqaan Apple caddeeyay Waxaad dayactir ku sameyn kartaa taleefannadaada. Habka shahaado siintu waa sahlan tahay waana bilaash laakiin, sida aan soo sheegnay, waqtigan xaadirka ah kaliya wuxuu ka shaqeynayaa wadanka Mareykanka.
Waxaan rajeyneyaa goor dhow halkii ugu dambeysay Apple ku celi istaraatijiyaddan hagaajin Gobollo kale, Spain ayaa lagu daray. Dabcan, ma rabno inaan ogaano qiimaha ay nagu kici doonto hagaaji iPhone-keena Xarumahan “la xaqiijiyay”.